ဒြပ်တို့၏ အခြေအနေ ၄ မျိုးအနက်မှ တစ်ခု
ပထမတစ်ခုကတော့ ရေဒီယိုအသံလွှင့် ဌာနတွေကနေတဆင့် ကမ္ဘာ ့အိုင်းယွန်းအလွှာ ( ionosphere) ကို တွေ့ရှိစေမှ ုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ ့အိုင်းယွန်းလွှာဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာ ့မြေပြင်မှ အကွာအဝေး ကီလိုမီတာ ၆၀ မှ ၁၀ဝ၀ အတောအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ အိုင်းယွန်းများစွာဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော ကမ္ဘာ ့လေထု အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လေထုအလွှာ အပေါ်ပိုင်းတွင်ရှိသော ionized gas အလွှာအချို ့သည် ရေဒီယို အသံလှိုင်းများကို တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စေပါသည်။ ဤသို့တန်ပြန်တုံ့ပြန်နိုင်မှုတွင် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း၏ မည့်သည့် နေရာမှာမဆို transmitter ရှိနေတဲ့အခါ ရေဒီယိုအချက်ပြစနစ်တွေကို ဖမ်းယူ၍ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့် ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆင်မပြေတာ တစ်ခုက အဲဒီ ionosphere အလွှာက တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရေဒီယို လှိူင်းတွေကို စုပ်ယူပေးနိုင်သလိုပဲ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရေဒီယိုလှိူင်း တွေကို ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ ့သံလိုက် စက်ကွင်းဟာ မတူကွဲပြားတဲ့ velocities အခြေအနေတွေမှာ လှိုင်းတွေ နဲ့ အမျိူးမျိူးသော polarizations ( သံလိုက်စက်ကွင်းရ ဲ့ orientation နဲ့ စပ်ဆက်နေတာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်) တွေကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ရာ အတွက် သက်ရောက်မှ ုတစ်ခုခုကို ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီသက်ရောက်မှ ုကနေ ghost signal ( Echo သံကဲ့သို့ပင် signal တွေက အနည်းငယ် စောရောက်တာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်သလို အနည်းငယ် နောက်ကျပြီးမှ ရောက်တာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ် ) တွေကိုထုတ်ပေးတယ်။ အချို့သော ရေဒီယိုဆက်သွယ်မှ ုတွေမှာ ရှိနေတဲ့ ချို ့ယွင်းချက်တွေ နဲ့ မပြည့်စုံမှ ုတွေကို မှန်ကန်စွာ နားလည်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် E.V.Appleton, K.G.Budden စသော သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးများက တစ်သမတ်ထဲမဟုတ်တဲ့ magnetized plasma ကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့မှ ထုတ်ပေးတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း သီအိုရီ ကို စနစ်တကျလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ အာကာသရူပဗေဒ ပညာရှင်တွေရဲ့အာကာသထဲမှာ ပလပ်စမာ တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာကာသရူပဗေဒ ဖြစ်စဉ်တွေကို ပိုမိုနားလည်ဖို့အတွက် ရူပဗေဒ ပလပ်စမာ သဘောတရားများကို နားလည်သဘောပေါက်မှုပြည့်ဝနေမှသာ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါသည်။ ဤနယ်ပယ်တွင် ရှေ ့ဆောင်စွန့်ဦးတီထွင်သူ Hannes Alfven သည် ၁၉၄၀ ဝန်းကျင်က magneto-hydrodynamics (MHD) သီအိုရီ ကို ရှာဖွေတွေ ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသီအိုရီတွင် ပလပ်စမာကို conducting fluid အဖြစ် အခြေခံကျကျ ဖော်ပြပြီး ပလပ်စမာသဘောတရားနှင့် ထိတွေ ့စေခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသီအိုရီကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အောင်အောင်မြင်မြင် အသုံးချနေတာကတော့ sunspots စစ်ဆေးမှ ုလုပ်ငန်းများ၊ solar flares၊ solar wind ၊ ကြယ်များဖြစ်ပေါ်လာမှုနှင့် အာကာသရူပဗေဒ နှင့် သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာ တော်တော်များများတွင် အသုံးပြု လေ့လာနေကြဆဲပင်ဖြစ်သည်။ MHD ရ ဲ့ သီးခြားစိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးသော ခေါင်စဉ်နှစ်ခုမှာ magnetic re-connection နှင့် dynamo theory တို့ပင်ဖြစ်သည်။ Magnetic re-connection ဆိုတာက magnetic နယ်ပယ်လမ်းကြောင်းတွေ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်က သံလိုက်စွမ်းအင်မှ အပူစွမ်းအင်သို့ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲမှ ုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လျပ်စစ်အားသက်ရောက်မှ ုရှိနေတဲ့ အမှ ုန်တွေဟာ အရှိန်ပြင်းထန်စွာဖြင့် သက်ရောက်လှ ုပ်ရှားမှ ုများကြောင့် စွမ်းအင်မြင့်မားစွာ ရရှိပိုင်ဆိုင်သကဲ့သို့ ဒီနေရာမှာလဲ solar flares တွေရဲ့ နောက်ကွယ်က mechanism ကို စဉ်းစားလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ Dynamo theory ဆိုတာကတော့ MHD fluid တွေရ ဲ့ ရွေ ့လျားမှ ုတွေဟာ macroscopic magnetic field ဖြစ်ပေါ်လာမှ ုဆီကို ဘယ်လိုဦးတည်နေတယ် ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြေပြင်အခြေအနေ နှင့် နေအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သံလိုက်စက်ကွင်းတွေ လျင်မြန်စွာ ယိုယွင်းမှုဖြစ်သွားခဲ့ရင် ၎င်းတို့ နှစ်ခုစလုံးကို Dynamo action က ထိန်းသမ်းထားနိုင်စွမ်း ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချက် ၂ ချက် ကြောင့် Dynamo action က အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ် တစ်ခုဖြစ်နေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ သံလိုက် စက်ကွင်းကို ထိန်းသိမ်းပေးထားတာက သူ့ရဲ့molten core ရွေ ့လျားမှ ုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း molten core ရွေ ့လျားမှ ုဖြစ်စဉ်တွေဟာ MHD fluid တစ်ခုအဖြစ် သဘာဝကျသော ခန် ့မှန်းနိုင်ခြေတစ်ခုခုကို ဖြစ်စေနိုင် ပါတယ်။
↑ (1995) Introduction to Plasma Physics. Taylor & Francis, 1−2။
↑ (2012) Introduction to Plasma Dynamics. CRC Press, 30။
↑ (2012) Introduction to Plasma Dynamics. CRC Press, 17။
↑ Phillips, K. J. H. (1995). Guide to the Sun. Cambridge University Press, 295။
↑ Aschwanden, M. J. (2004). Physics of the Solar Corona. An Introduction. Praxis Publishing. ISBN 3-540-22321-5။
↑ Piel, A. (2010). Plasma Physics: An Introduction to Laboratory, Space, and Fusion Plasmas. Springer, 4–5။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပလာစမာ_(ရူပဗေဒ)&oldid=473334" မှ ရယူရန်
၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၁၇:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။